Taliyaha Ciidanka Dekeda Boosaaso oo ku dhaawacmay Is-rasaasayn ka dhacday Boosaaso | SAHAN ONLINE
Taliyaha Ciidanka Dekeda Boosaaso oo ku dhaawacmay Is-rasaasayn ka dhacday Boosaaso
BOOSAASO – Waxaa maanta dhaawac soo gaaray Taliyihii ciidanka Dekedda Boosaaso Maxamed Cali Xaashi iyo laba askari kadib markii ay Israsaaseyn dhexmartay Ciidanka Booliska Iyo askar ka tirsan kuwa Badda ee ay maalgeliso dowladda Imaaraatku.
Taliyaha iyo labadiisa askari ayaa dhaawacooda la dhigay Isbitaalka guud ee dowladda halkaasoo lagu daaweynayo.
Dhakhaatiirta Isbitaalka ayaa sheegay in dhaawax fudud uu taliyuhu ka gaaray feeraha uma baahna qaliin degdeg ah ,sidoo kale dhaawaca askarta ayaa ah mid fudud.
Dad ka agdhowaa goobta falku ka dhacay ayaa sheegay in Is-rasaaseyntu timid kadib markii uu muran soo kala dhexgalay Ciidanka Badda ee PMPF oo Isbaaro u taalay mid kamid ah Waddooyinka muhiimka ah ee Boosaaso iyo Booliska oo amar ku bixiyey in laga qaado Isbaarada la dhigay.
Labada ciidan ayaa kadib rasaas isku furay taasoo si weyn looga maqlayey guud ahaan magaalada Boosaaso.
Dhanka kale ,waxaa maanta magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ay ka qeybqaateen qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada taasoo sababtay kadib markii la diiday in wax lagu iibsado lacagta Soomaaliga.
Taliyaha Dekeda Boosaaso Maxamed Cali Xaashi ayaa muddo dheer ka howlgalayey Dekeda oo lagu tilmaamo mida ugu amniga wanaagsan.